Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0313 tal
Ny fanomezana ny fanahin'Andriamanitra
Talata 16 Apr.
Vakio ny Joe. 3:1,2 ary koa ny Asa. 2:1-21. Ahoana no fomba anazavan’i Petera ny faminanian’i Joela eto?
Nambaran’i Petera, tamin’ny andro Pentekôsta, fa nanatanteraka ny teny fikasany mikasika ny fandrotsahana ny Fanahy Masina, araka izay nomena tamin’ny alalan’i Joela, Andriamanitra. Miaraka amin’izany fandrotsahana ny Fanahy izany, ary ho famantarana hita maso ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra eo amin’ny tantaran’ny zanak’olombelona, dia hasian’Andriamanitra fisehoan-javatra tsy fahita ihany koa eo amin’ny zavaboary, dia ety ambonin’ny tany sy eny amin’ny lanitra.
“Mifandray mivantana amin’ireo toe-javatra amin’ny andro lehiben’Andriamanitra dia nampanantena fisehoan’ny Fanahiny amin’ny fomba manokana Jehovah tamin’ny alalan’ny mpaminany. Joela 3:1. Tanteraka ny ampahany amin’io faminaniana io tamin’ny nirotsahan’ny Fanahy tamin’ny andro Pentekosta; nefa ho tonga amin’ny fahatanterahany feno izany amin’ny fanehoana ny fahasoavan’Andriamanitra izay hiaraka amin’ny famaranana ny asan’ny filazantsara.” - HM, tt. 13-14.
Raha eo amin’ny tontolo nisy an’i Joela, dia hisy firotsahan’ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny fomba mivatravatra aorian’ny fibebahana. Izany dia hitondra fanavaozana mahagaga. Tsy fandravana no hiseho fa fanomezan’Andriamanitra fitahiana maro be tokoa. Manome toky hatrany ny vahoakany Andriamanitra fa haverina amin’ny laoniny indray ny zavaboariny ary hafahana amin’ny mpampahory azy ny firenena.
Arotsaka amin’ny vahoakan’Andriamanitra ny Fanahy, tahaka ny diloilo fampiasa amin’ny fanosorana araraka eo ambony lohan’ireo olona nofidin’Andriamanitra hanao asa manokana. Ny Fanahy dia fanomezan-kery ihany koa ho an’ny mpandray azy mba hahazoan’izy ireo manao asa manokana ho an’Andriamanitra (Eks. 31:2-5, Mpits. 6:34). Amin’io vanim-potoana io fotsiny ny fisehoan’ny Fanahy dia hahatratra velarana tsy hita pesipesenina. Amin’io fotoan-dehibe eo amin’ny tantara io ny famonjena dia ho azon’izay rehetra mitady an’Andriamanitra. Hirotsaka amin’izay rehetra mahatoky ny Fanahin’Andriamanitra — na firy taona izy na firy taona, na lahy izy na vavy, ary na inona sokajy misy azy eo amin’ny fiaraha-monina na inona — ho fahatanterahan’ny fanirian’i Mosesy, dia ny hahatonga ny vahoakan’Andriamanitra rehetra ho mpaminany sy ny handatsahan’i Jehôvah ny Fanahiny amin’izy ireo (Nom. 11:29).
Inona avy ireo zavatra azonao atao eo amin’ny fiainanao, izay hahatonga anao ho vonona kokoa handray ny firotsahan’ny Fanahy Masina?